आलमकै आदेशमा भाइ डा. अख्तरले घाइतेलाई दिएका थिए बेहोस हुने इन्जेक्सन
रौतहट –१२ वर्षअघि रौतहट राजपुर फरहदवा–४ स्थित शेख इद्रिसको टहरोमा भएको बम विस्फोटमा घाइते भएकाहरूलाई इन्जेक्सन लगाई बेहोस पार्ने डाक्टरको परिचय खुलेको छ ।
घाइतेलाई इन्जेक्सन लगाई बेहोस बनाउने कार्यमा सांसद मोहम्मद अफ्ताब आलमका काकाको छोरा डा. समिम अख्तर संलग्न रहेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ । अख्तर हाल रौतहटको गौरमा कांग्रेसका पुराना नेता शेख इद्रिस खालिहानको नाममा ‘श्री शेख इद्रिस डाइग्नोस्टिक सेन्टर’ क्लिनिक सञ्चालन गरेर बसेका छन् ।
डा. अख्तरले पाकिस्तानबाट एमबिबिएस अध्ययन गरेका हुन् । तर, प्रहरीले इन्जेक्सन लगाई बेहोस बनाउने कार्यमा संलग्न अभियुक्तबारे भने अनुसन्धान अघि बढाएको छैन । इन्जेक्सन लगाउने कार्यमा संलग्नहरूको सम्बन्धमा सूचना प्राप्त नभएकाले अनुसन्धान अघि नबढाएको प्रहरीको भनाइ छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रमुख एसपी भूपेन्द्र खत्रीले इन्जेक्सन लगाई बेहोस बनाउने कार्यमा संलग्न हुनेहरूको सम्बन्धमा सूचना प्राप्त नभएको बताए । अब भने यस सम्बन्धमा पनि अनुसन्धान अघि बढाइने उनले बताए । ‘विस्फोटका घाइतेलाई इन्जेक्सन लगाएर बेहोस बनाएको र पछि इँटाभट्टामा लगेर जलाएको जानकारीमा छ । तर, कसले इन्जेक्सन लगाएको हो ? त्यस सम्बन्धमा भने सूचना थिएन । अब सूचना संकलन गर्ने कार्यमा प्रहरी अघि बढिसकेको छ,’ एसपी खत्रीले भने ।
मृतक पिन्टुका बाबुले प्रहरीसँग खुलाए डा. अख्तरको संलग्नता
मृतक पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंहका बाबु श्रीनारायण सिंह राजपुतले विस्फोटमा आफ्नो छोरा घाइते भएको, तर पछि इन्जेक्सन लगाई बेहोस बनाएको बयान प्रहरीलाई दिएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को प्रतिवेदनमा भने सिंहले घाइते भएका पिन्टुलाई डा. समिरले इन्जेक्सन लगाई बेहोस बनाएको बताए छन् । प्रतिवेदनमा उनले भनेका छन्, ‘मलाई सानो घाउ छ । म घर जान सक्छु भन्थेँ, तर अफ्ताबको भाइ डा.समिरले इन्जेक्सनमा जहर हाली मेरो छोराको नशामा दिएको थाहा पाएँ । मेरो छोरा मर्ने अवस्थामा थिएन ।’
नयाँ पत्रिकासँगको कुराकानीमा पनि भने सिंहले डा. समिमले नै घाइते छोरालाई इन्जेक्सन लगाई बेहोस बनाएको बताए । ‘मेरो छोरालाई इन्जेक्सन लगाई बेहोस बनाए । पछि, इँटाभट्टामा लगेर जलाए । इन्जेक्सन लगाएको अफ्ताबका भाइ डा. समिमले हो । मैले इन्सेकलाई त्यसवेला समिर भनेको थिएँ । मुस्लिम समुदायमा नाम अप्ठ्यारो हुन्छ । त्यसवेला समिर भनेँ । त्यो मान्छे खासमा समिम हो,’ उनले भने ।
प्रहरीका स्रोतका अनुसार घटना हुँदा डा.समिम राजपुरस्थित निवासमै थिए । बम विस्फोटमा घाइते भएको थाहा पाएपछि उनी अफ्ताबको सम्पर्कमा पुगेका थिए । अफ्ताबकै आदेशमा उनले घाइतेलाई इन्जेक्सन लगाएको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
आज खीर दिवस मनाइँदै
केपी ओलीसँग भेट्न ‘आनाकानी’ गर्दै माधव नेपाल
सुरुङमार्ग र पक्की पुलको डिजाइन तयार गर्न चिनियाँ ...
इन्जिनीयरिङको फीस तिर्न माटो बोकिन् यी महिलाले